Shir deg deg ah oo xalay ay yeesheen Golaha Wasiirada Soomaaliya – XAMAR POST
Shir deg deg ah oo xalay ay yeesheen Golaha Wasiirada Soomaaliya
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa shir deg deg ah xalay waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sida ay sheegeen Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada.
Dood dheer ka dib, ayaa la sheegay in Ra’iisal Wasaare Ku xigeenku uu soo xiray kulanka, sababo ku aadan golaha oo laba garab u kala qaybsamay, mana jirin cid Warbaahinta uga warantay wixii looga hadlay kulanka.
Wariyeyaasha Magaalada Muqdisho oo bilowgii hore ee shirkan looga yeeray Aqalka Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, ayaa intii uu socday shirka lagu wargeliyay inay dib isaga laabtan.
Dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa isku khilaafsan go’aanka dhex dhexaadnimada ee dowladdu ka qaadatay xiisada Khaliijka, iyadoo maamul goboleedyada ay la safteen Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Dagaal toos ah oo ka socda Duleedka Kismaayo & Ciidamo Cadaan ah oo weerar lagu qaaday
Cabsi soo kala dhex gashay Al-shabaab iyo Ajaanibta la joogta